सरकार पारदर्शी र जनमुखी हुनुपर्छ : देवेन्द्र पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य | Rajmarga
सरकार पारदर्शी र जनमुखी हुनुपर्छ : देवेन्द्र पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य
नेकपा नेतृत्वको सरकारको अहिले सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । जनअपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न सकेको छैन । पार्टीभित्रको विवाद अहिले समाधान उन्मूख रहेको छ । अब नेकपा जनपक्षीय भएर जाने हो ? अब अध्यक्षद्वय बीचको अन्तरसंघर्ष अन्त्य भएको हो ? यही प्रसंगमा संघीय संसद तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलसँग राजमार्ग डट कमका लागि गरिएको कुराकानीको संपादित अंशः
नेकपा बहुमतको अवस्थामा छ, सरकार र सत्ता सञ्चालनमा नेकपा असफल भएको देखियो ? किन ?
असफल भएको छैन । कस्ले भन्यो, असफल भयो भनेर ? भनेको जति काम गर्न सकेको छैन । जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन । त्यो सत्य हो । नेकपा पुरै असफल भयो, सरकार असफल भयो भन्ने कुरा सही हैन ।
सरकारले जनपक्षीय काम गर्न सकेको छैन ? सबै आफ्नै हुँदा पनि काम गर्न के ले रोकेको छ ?
काम नै भएका छैन भन्ने सत्य होइन । राम्रा र धैरै काम पनि भएका छन् । सरकारलाई काम गर्न कसैले रोकेको छैन । सरकारले काम गरिरहेको छ । कोभिड नियन्त्रण गर्न सरकारले सकेसम्म पहलकदमी गरिरहेको छ, पुगेको छैन । कन्ट्रयाक ट्रेसिङको काम गरिरहेका छ । अस्पताल निर्माणको कामहरु गरिरहेको छ । देशैभर स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग मिलेर आइसोलेसन सेन्टरहरु बनिरहेका छन् । देशैभरी भएका अस्पतालहरुमा स्तरोन्नतीको काम भइरहेका छन् । समस्यामा परेका नागरिकहरुलाई विदेशमा लाने र ल्याउने काम भएकै छ । त्यसकारण कामै गरेन भन्ने हैन । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशको सीमित स्रोत साधान परिचालन गर्दा जनताको अलि धेरै अपेक्षा थियो र छ । त्यसैले निर्वाचन दुई तिहाई नजिक मत दिएर विश्वास र भरोसा साथ स्थायी सरकार जनताले दिएका छन् । जनताले सोचेकोे जति काम नभएको मात्र हो ।
कोभिड नियन्त्रण भएपछि सरकारले आफ्नो काम कारवाहीलाई विस्तारै विस्तारै अगाडि बढाएर लिएर जान्छ । सरकारले कामै गरेन, सरकारले कुनै भूमिकै खेलेन, जनताको पक्षमा कामै गरेन भन्नु भन्दा पनि अपेक्षा अनुरुप काम गर्न सकेको छैन । अझै पनि सरकारले आफूलाई सुर्धानुपर्छ भन्ने कुरा साँचो हो ।
५ बर्षको स्थायी सरकारले काम गर्ने मेसो पाउन नसकेको हो ?
सरकारले तीन पटकसम्म नीति तथा कार्यक्रमको बजेको प्रस्तुत गरे । कतिपय ठुल्ठुला पूर्वाधारका कामहरु पनि भएका छन् । कोभिडका कारणले भौतिक पूर्वाधारका कामहरु प्रभावित भएर अर्थ प्रणाली नेगेटिभ दिशातिर गएको साँचो हो । भयावह अवस्था सिर्जना भएको छैन । कोभिड नियन्त्रण भएपछि सरकारले आफ्नो काम कारवाहीलाई विस्तारै विस्तारै अगाडि बढाएर लिएर जान्छ । सरकारले कामै गरेन, सरकारले कुनै भूमिकै खेलेन, जनताको पक्षमा कामै गरेन भन्नु भन्दा पनि अपेक्षा अनुरुप काम गर्न सकेको छैन । अझै पनि सरकारले आफूलाई सुर्धानुपर्छ भन्ने कुरा साँचो हो ।
तर काम गर्नेभन्दा पनि कति कति समयमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने भन्नेतिर प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएको देखिन्छ नि ?
पार्टीमा अलिअलि विवाद थियो । त्यसले सरकारको काम कारवाही र गतिविधिको निम्ति धेरै ठुलो प्रभाव पा¥यो । विवाद अब विस्तारै सहजीकरणतिर, महाधिवेशनतिर, सहमतितिर गएकाले यो समस्याको हल हुँदै जाला, त्यो दिशामा अगाडि बढिरहेको छ ।
मन्त्रीमण्डल गठन, पुनर्गठन यो सबै प्रधानमन्त्रीको अधिकारमा निर्भर हुने कुरा हो । पार्टीको सुझावमा सरकारलाई गतिशील बनाउन क्याविनेटलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा उहाँको कुरा हो ।
सरकार सेटिङ प्रणालीमा सञ्चालन भएको भन्ने आरोप नेताहरुले लगाउन थालेका छन् ? सेटिङ भनेको के हो ?
अब प्रमाणित भएर भन्न प¥यो नि, कसैले आरोप लगाउँदा । आरोप त विभिन्न हुने भए । लोकतन्त्रमा आशंका, असन्तुष्टि हुन्छ । आरोप चाहिँ प्रमुख कुरा हैन, प्रमाणित गर्ने कुरा चाहिँ प्रमुख कुरा हो । आरोप प्रमाणित भएको भ्रष्टाचारमा संग्लन भएकाहरुलाई कारवाही हुन्छ, भएको छ । प्रमाणित नभएको कुराको पछाडि दौडने कुरा भएन ।
पार्टीभित्रको बरिष्ठ नेताहरुले नै सरकार विचौलियामुखी भयो, सेटिङमा सञ्चालन भयो भन्ने अवस्था कसरी आयो त ?
त्यो जस्ले भन्नु भएको छ, उहाँहरुको कुरा हो । उहाँहरुले नै भन्नु होला । कहाँकहाँ सेटिङ भए, कसरी विचौलियामुखी भए भनेर । मैले जवाफ दिन नमिल्ला । तर अलि बढी पारदर्शी हुनु पर्दछ । जनताको नियन्त्रण, अनुगमनमा सरकार हुनुपर्दछ । सरकारले जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा सही हो । तर यहाँ यहाँ यसरी भन्ने कुुरा त हामीले भन्ने कुरा भएन । जिम्मेवार कमरेडले पार्टी कमिटीभित्र, सरकारको अधिकारीलाई यहाँयहाँ समस्या भयो भनेर पुष्टि गर्नुभयो भने त्यसलाई सच्याउने प्रक्रिया अगाडि बढ्ला ।
सरकार र पार्टीप्रति जनताको निराशा बढ्दो छ ? अब पार्टीले जनताको माग सम्बोधन कसरी गर्छ ? पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद त मिल्यो हैन ?
पार्टीको आन्तरिक विवाद करिबकरिब मिल्ने दिशातिर गएको छ । जनताहरु निराश थिए । सरकारले सोचेको जस्तो काम गर्न नसकेका कारण जनता असन्तुष्ट भएको साँचो हो । तर फेरी पनि विवाद विस्तारै सहजीकरणतिर, सरकारले पनि हिजो जनतामा गरेको प्रतिबद्धता र घोषणापत्रमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ । त्यसो हुँदा निराशालाई क्रमशः अलिकता आशातिर लैजाने प्रयत्न हुन्छ ।
हिजो कार्यान्वयन नभएर समस्या भएको थियो । पहिला पार्टीको निर्णय नहुँदा, त्यसको स्वामित्व नलिँदा र सहमति भएका कुराहरु कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको थियो । हिजो निर्णय प्रतिवेदनमा प्रस्तावित भएको छ, र निणयार्थ प्रस्तुत भएर निर्णय पनि भएको छ । कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अब जान्छ । कार्यान्वयनमा लैजानलाई निर्णय गरिएको हो ।
हिजोको स्थायी कमिटीको बैंठकले अध्यक्षद्वयको जिम्मेवारी त स्पष्टरुपमा छुट्याइदिएको छ । पूर्ण कार्यान्वयनको सम्भावना कतिको छ ?
यो निर्णय कार्यान्वयन हुनैको लागि गरिएको हो । हिजो कार्यान्वयन नभएर समस्या भएको थियो । पहिला पार्टीको निर्णय नहुँदा, त्यसको स्वामित्व नलिँदा र सहमति भएका कुराहरु कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको थियो । हिजो निर्णय प्रतिवेदनमा प्रस्तावित भएको छ, र निणयार्थ प्रस्तुत भएर निर्णय पनि भएको छ । कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अब जान्छ । कार्यान्वयनमा लैजानलाई निर्णय गरिएको हो ।
कतिपय निर्णय कार्यान्वयन भएको थियो । कतिपय भएन त्यसको विषयमा पनि छलफल गरियो । बहस गरियो । र, हामी अर्को अध्यायमा प्रवेश ग¥यौं ।
नेकपाको उद्देश्य एउटा गन्तव्य अर्को जस्तो देखियो । उद्देश्य र गन्तव्यलाईसँगै लिएर जान नसक्नुको समस्या के हो ?
नसक्ने भनेका छैनौं, सक्ने भनेका छौं । जानका निम्ति कुन तरिका भन्ने विषयमा छलफल चलेको छ । लक्ष्य हाम्रो एउटै छ । उद्देश्य हाम्रो एउटै छ । एउटै लक्ष्य र उद्देश्यमा पुग्नका लागि हामीले अलिकति छलफल तथा बहस गरेको हौं । माधिवेशनमा झन्, बढी गर्छौ । र, नेकपाको नेतृत्वमा समृद्ध समाजवादको सपना देखेका छौं । त्यहाँ पु¥याउनको निम्ति पार्टीको तर्फबाट अधिकतम प्रयास रहन्छ ।
पार्टीको उद्देश्य साम्यवादको छ, तर सरकारको गति चाहीँ विपरीत छ ?
अब त्यो देख्नेले देखेको होलान् । तर पार्टीले भनेको गतिविधि र काम कार्वाहीमा केही समस्या पैदा भएको हो । सरकारको विपरीत गति भन्ने कुुरा सही हैन ।
अहिलेसम्म सैद्धान्तिक पाटो र व्यवहारिक पाटोलाई क्लियर बनाएर अगाडि बढेको त देखिँदैन ?
ठिकै छ । आ–आफ्नो बुझाइ, मुल्याङ्कनहरु होलान् । सरकारको विषयमा पार्टीमा गम्भीर छलफल भएको छ । मैले सार्वजनिक रुपमा भन्नुभन्दा पनि हामीले आफ्नो कुराहरु पार्टीमा राखेका छौं, राख्छौं । कहाँकहाँ कमजोरी भएको छ, त्यो राख्छौं । लामो समयपछि स्थायी कमिटीको बैठक भयो । लामो छलफल भएको छ । सच्याउने प्रतिबद्धता भएको छ । सच्याउनको निम्ती सकारात्मक भएर सोच्नु नै हामी सबैको निम्ति आवश्यकताको कुरा हो ।
नेकपाको भविष्यसँग नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्य जोडिएको छ ? अब नेकपा कसरी अगाडि बढ्छ ?
त्यही भएर त सबैले आशा भरोसा गरेर नै देशभरबाट जनताले समर्थन गरेको छ । पार्टीले हिजो गरेको प्रतिबद्धता छोडेर हिड्यो भन्ने भएको छ । पार्टीभित्र बहस होस् छलफल होस् । पार्टी टुटफुटतिर नजाओस् भन्ने कुरा भएको हुँदा जनताले नेकपालाई पर्खिएर बसेका छन् । त्यसो भएर नेगेटिभ मात्र कुरा गर्नु राम्रो हुँदैन ।
विवादित एमसीसी प्रोजेक्ट पास गर्ने निर्णय स्थायी कमिटीले गरेको छ । तर जनता त एमसीसीको विपक्षमा छन् नि ?
गर्ने भन्ने निर्णय भएको हो । गरिसकिएको छैन । सबैको राय सल्लाह सुझावहरुलाई समेटेर केही बुँदाहरु संशोधन गरेर पास गर्ने हो । केही बुँदा संशोधन गर्न एमसीसीको निकायसँग पठाउने निर्णय भएको छ ।
Previous post: कक्षा १२ का विद्यार्थीहरुको विवरण संकलन गर्दै परीक्षा बोर्ड
Next post: सिन्धुपाल्चोक, घुम्थाङको पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ९ पुग्यो
केपिलासगढी गाउँपालिकाले लगायो बिना अनुमति भीर माहुरीको मह काढ्न
सुनसरीमा ट्रक र एम्बुलेन्स ठोक्किँदा ७ जनाको ज्यान गयो